Nahazo vahana tanteraka ny vono olona amin’ny fomba feno habibiana, vaky trano, halatr’omby, halatra taolam-paty, manginy fotsiny ny fakàna an-keriny. Mandry andriran’antsy ny vahoaka Malagasy, mitaintain-dava noho ny afitsoky ny asan-dahalo.
Anisany tena lasibatra matetika tamin’izany ny faritra atsimon’ny Nosy iny. Mandry an-tsaha ny ankamaroan’ny zaza amam-behivavy noho ny fanjakazakana ataon’ireo olon-dratsy. May ny tanàna, manjavona ao anatin’ny fotoana fohy ny fananana nohariana tao anatin’ny taona maro. Mahatsiaro tena ho manana anjara andraikitra goavana amin’izany ny kandidà Andry Rajoelina laharana faha-13. Nambarany fa fahadisoana ho azy raha tsy mandray ny andraikiny hanavotra ny tanindrazana izy.
Nandritra ny fitetezam-paritra nataony tany amin’ny tapany atsimon’ny Nosy iny, nandalovany tao Ifanadiana, Ivohibe ary Midongy Atsimo dia fampanantenana goavana no nomen’ny mponina fa hitondra vahaolana maharitra izy hiadiana amin’ny asan-dahalo. Nambarany tamin’izany fa hatsangany ny hery manokana hiady amin’ny asan-dahalo. Hohatsaraina ny fitaovam-piadiana hoentin’izy ireo miasa mba ho afaka hifanandrina amin’ny dahalo.
Mba hanafoanana ny halatr’omby ary mba hanamorana ny fanarahan-dia dia nilaza ny kandidà laharana faha-13 fa hampiasaina ny “puce” manokana mba hahafahana mahalala ny toerana itondran’ireo dahalo ny omby. Faly ny vahoaka raha nahare, sambany no nisy olona sahy nanao fanamby goavana tahaka izany hoentina hanafoanana ny asan-dahalo. Fantatra fa ireo vahoaka ireo dia lasa miaina ao anaty fahantrana tsy fidiny noho ny tsy fandriampahalemana miseho lany.